I-LinkedIn Iqalisa Ukuvuselelwa Okuxhasiwe | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 20, 2013 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
I-LinkedIn ibilokhu ukuhlola izibuyekezo ezixhasiwe nezinkampani ezifana I-Hubspot, I-Adobe, i-Lenovo, i-Xerox ne-American Express… manje sebeyivulela wonke umuntu. Lokhu kuzoba yindlela ephumelelayo yokuthi izinkampani ze-B2B zikhombe futhi zikhombe amathemba ngemizamo yazo yokuthengisa okuqukethwe ngaphakathi kwe-LinkedIn.
Izinzuzo Ukuvuselelwa Okuxhasiwe Kwe-LinkedIn
Khulisa ukuqwashisa nokwakha ukuqonda - Isixazululo sokumaketha sokuqwashisa okwandisa ngokushesha nokwakha umbono womkhiqizo, imikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Ukuhola kwekhwalithi yeDrayivu - Khiqiza ukuhola kwekhwalithi ngokwabelana ngemininingwane efunwa ochwepheshe. Buka lokho okuqukethwe kusakazeka ngokwabelana kontanga okwenzeka ngokwemvelo ku-LinkedIn.
Yakha ubuhlobo - Shicilela okuqukethwe kwakho ngezibuyekezo ezixhasiwe ukudala inani nokwakha ukwethenjwa okuvusa izingxoxo eziqhubekayo nobudlelwano bamakhasimende obujulile.
Ukubuyekezwa Okuxhasiwe kwe-LinkedIn kugxila emuva ekhasini lakho lenkampani le-LinkedIn ngakho-ke qiniseka ukuthi ube nokusetha kwekhasi leNkampani uma ungakakwenzi.
Tags: ukukhushulwa kokuqukethweLinkedInizibuyekezo ezixhasiwe ze-linkedinukukhangisa okukhokhelweizibuyekezo ezixhasiwe
I-Tumult Hype 2 ye-OSX: Dala futhi uphilise i-HTML5